तीन विधायकले विधानसभामा नै गर्ने विरोधःममता व्यानर्जीको तुघलगी फरमानले पड्काउनेछ ज्वालामुखी – खबरम्यागजिन
HomeBreaking Newsतीन विधायकले विधानसभामा नै गर्ने विरोधःममता व्यानर्जीको तुघलगी फरमानले पड्काउनेछ ज्वालामुखी
तीन विधायकले विधानसभामा नै गर्ने विरोधःममता व्यानर्जीको तुघलगी फरमानले पड्काउनेछ ज्वालामुखी
-4 जूनदेखि शुरू हुने प्रतिवाद जुलूसनै पहाड़को राजनीतिमा टर्निङ पोइन्ट हुनसक्ने
-मुख्यमन्त्रीले केन्द्रको नियम नमाने मोर्चाले ममताको पनि नमान्ने
दार्जीलिङ पहाड़का तीनजना विधायकले पनि बङ्गला भाषा थोप्ने राज्य सरकारको प्रस्तावको विरोध विधानसभामानै गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। यसका साथै विधानसभामा आफ्नो विरोध प्रदर्शन गर्नअघिनै यी विधायकहरुले विधानसभा अध्यक्षसमक्ष पनि आपत्ति पत्र पेश गर्ने योजना बनाएका छन्। बङ्गला भाषा अनिवार्यको विरोधमा पहाड़का तीनजना विधायक किन चुप लागेर बसिरहेका छन् भन्ने प्रश्‍नमाथि खरसाङ र कालेबुङका विधायकद्वय डा. रोहित शर्मा र सरिता राईले आज स्पष्टीकरण दिएका छन्। यसबारे डा. रोहित शर्माले भने-दार्जीलिङ, खरसाङ अनि कालेबुङका विधायकहरुमाझ आगामी केही दिनभित्रै राज्य विधानसभाका अध्यक्षसमक्ष विरोध जनाउने सल्लाह भइसकेको छ।
हामीले अर्को सप्ताह यसबारे विधानसभा अध्यक्षलाई एक पत्र दिनेछौं, जसले आगामी विधानसभा सत्रमा बङ्गला भाषा अनिवार्य गर्ने विषयमाथि ल्याइने विधेयकको विरोध गर्न धेरै सहयोग पुग्नेछ। उनले भने-अर्को सप्ताह दार्जीलिङमा राज्यको क्याविनेट मन्त्री मण्डलको बैठक हुने कुरा सुनिन्दैछ अनि त्यसै बैठकमा राज्यभरिका विद्यालयहरुमा प्रथम श्रेणीदेखि 10औं श्रेणीसम्म बङ्गला भाषा पढ्नुपर्ने प्रस्ताव पारित हुनसक्छ। तर क्याविनेटले पारित गरेको प्रस्तावलाई विधानसभामा ल्याउनैपर्छ, तब हामी विधानसभामा त्यसको विरोध गर्नेछौं अनि हामीले विधानसभा अध्यक्षलाई दिइएको विरोध पत्रले पनि त्यस समय ठूलो काम गर्नेछ। बाहिर बोलिरहँदा त्यसको कुनै ठोस प्रभाव पर्दैन, तर विधानसभाभित्रै बोलेको वा विरोधको ठूलो महत्व हुन्छ।
यसैले हामी पहाड़का तीनजना विधायकले विधानसभामानै बङ्गला भाषा अनिवार्य गर्ने राज्य सरकारको प्रस्तावको विरोध गर्ने योजना बनाएका छौं। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले बङ्गला भाषा थोप्ने राज्य सरकारको नीतिको मात्रै विरोध गरेको हो, गोजमुमोले बङ्गला भाषा र बङ्गाली समुदायको विरोध गरेको होइन। तर यसलाई दार्जीलिङ पुलिसको माध्यमबाट साम्प्रदायिक सद्भावना बिग्रिने कुरा गरेर गोजमुमोको विरोधलाई उल्टा देखाउने प्रयास भइरहेको छ। म नेपालीमा बोल्न सक्छु भने उनीहरु बङ्गलामा किन पढ्न हुँदैन भन्ने कुरा गरेर मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले तुघलगी फरमान गरिरहेकी छन्। यसप्रकारको लिँड़ेढिपीपनले एकदिन ज्वालामुखी पड़्किनेछ। केन्द्र सरकारले लागू गरेको नियम मान्नै नदिने राज्यकी मुख्यमन्त्रीले आफ्नै राज्यको दार्जीलिङ पहाड़, तराई अनि डुवर्समा कसरी जबर्जस्ती आफ्नै नियम थोप्न खोज्दैछिन्? उनले प्रश्‍न गरे।
यदि राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले केन्द्रको नियम मान्दिनन् भने हामी पनि उनको नियम मान्दैनौं। यसरीनै कालेबुङकी विधायिका सरिता राईले पनि डा. रोहित शर्माको वक्तव्यमाथिनै जोड़ दिंदै पहाड़का तीनजना विधायकले पनि यस भाषिक अतिक्रमणको कुरामा कानमा तेल हालेर नबसेको स्पष्टीकरण दिइन्। उनले भनिन्-पार्टी अध्यक्षको निर्देश र पार्टीको संविधानलाई शिरोपर गरेर पहाड़का तीनैजना विधायकहरु जातीय अस्मिता, राष्ट्रिय चिन्हारीको लागि जस्तै कठोर कार्य गर्न प्रतिवद्ध छन्। यसअघि आजको सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पार्टी सहसचिव विनय तामाङले4जूनदेखि शुरू हुने प्रतिवाद जुलूसनै पहाड़को राजनीतिमा टर्निङ पोइन्ट हुनसक्ने पनि अनुमान व्यक्त गरे। यति मात्रै होइन, आजको सभामा वक्तव्य राख्ने अन्य प्रायः वक्ताहरुले पार्टी अध्यक्ष विमल गुरूङलाई अब भाषा आन्दोलनलाईनै गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको रूपमा परिवर्तन गरेर लाने पनि अपील गरेका थिए।
‘ममता व्यानर्जीले गोर्खाल्याण्ड दबाउने कुटनीति गर्दैछ’